Izay mivari-lavo no adala indrindra … – i am a malagasy in genève
26 mai 2008 27 mai 2008
Izay mivari-lavo no adala indrindra …
« Tsy misy tsy diso izay mandia ny tany fa izay mivari-lavo no adala indrindra » hoy ny ohabolan’ny Ntaolo… Tsy araky ny fanahian’ny fitondram-panjakana, fa tamim-pilaminana no nahatanterahan’ny fampisehoana miezinezina izay nataon’i Rossy, omaly Alahady 25 May 2008 tany Antsonjombe. Nanatri-maso tany an-toerana sady nanao tatitra feno fientanam-po ny namana Tsikisariaka >>, isan’ireo mpankafy nahatratra 50’000 izay nandray anjara tamin’izany firavoravoam-bahoaka izany [midi-madagsikara.mg >>].
Ny ampitson’izany fankalazana mietriketrika … am-pilaminana … izany dia notoloran’ny fanjakana teny fankasitrahana i Rossy, raha nampanantsoin’i Dr Jean Louis Robinson Ministry ny Kolontsaina an-tratra (intérim) izay Ministry ny Fahasalamana sy ny fandrindrana ny fianakaviana, notronin’ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Ministeran’ny Fanatanjahantena, Kolotsaina sy ny Fialamboly [lexpressmada.com >>].
Tsahivina fa saika tsy tanteraka izany andian-dridrakira izany nohon’ny fanakantsakanana nataon’ingahy Patrick Ramiaramanana, ministry ny Kolontsaina (amperinasa tamin’izany fotoana izany). Nisy anefa ny « fampihatonana » io ministra io nandritra ny fanavaozana ny governemanta izay notanterahina ny faran’ny volana Aprily 2008 ary dia tsy nanendrena akory izay olona hisolo azy ho Ministry ny Fanatanjahantena, Kolotsaina sy ny Fialamboly. Tanteraka ihany ireo fampisehoana nokasaina, na dia tsy maintsy nahemotra kely aza ny daty vitsivitsy.
Nahay nitraka fa tsy nivari-lavo tamin’ny « hadisoany » ny fanjakana tamin’ity indray mitoraka ity. Isan’ireo maniry izay ipetrahan’ny fomba fitondra toy izao aho. Anefa dia ny ho avy ihany no hanambara amintsika raha sendrasendra sy hetsika tokana fotsiny izao na fiovana maharitra hitoetra ?
Posté dans fampisehoana, tsetsatsetsaTagué adala, fampisehoana, hira, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, rossypar tomavana4 commentaires
4 réflexions sur “Izay mivari-lavo no adala indrindra …”
Fa nahoana kosa moa i rossy no havahana eo @ samy mpanankato e! nefa samy mba nihira teo antsonjombe daholo anie kanefa tsy nisy noraisiny fanjakana izany e! izao ve noho i rossy dia raisina sy omena fankasitrahana manokana! izy anefa zao tsy ho isan’ireo mpanakanto hando hetra satria tsy mipetraka eto dago! asa aloa e!
28 mai 2008 à 15:56
Raha ny fahitako azy dia hetsika pôlitika natao « hampandriana adrisa » io fandraisana an’i Rossy io. Tsy nisy fanomezana mari-pankasitrahana na zavatra « inona manao akory », fa mba fihaonana ifanatrehan-tava fotsiny, sy anarenana ireo romoromo mety naterak’ireo « rano raraka » teo aloha … satria hita tokoa taty aoriana fa tsy mitombona ny fandrarana an’i Rossy.
>izao ve noho i rossy dia raisina sy omena fankasitrahana manokana!
Azoko ny fanontaniana manitikitika anao mikasika izay halehan’ireo volabe voa-angona teny Antsonjombe ireo. Tsy fantatro ny lalàna araka hetra izay mifehy ireo tombom-barotry ny fampisehoan’i Rossy ireo. Heveriko anefa fa afaka matoky ny fanjakana isika amin’ny fanaraha-maso akaiky izay ampahany tokony handoavan-ketra. Eny, na dia ny momba ireo vola kirakairan’ny mpanodina [mpikarakara ireo andiam-pampisehoana] Media Consulting izay monina eto Madagasikara, fotsiny ihany aza 😉
5 juin 2008 à 13:42
tena tsara ny ady hevitra ato fa rah ny momba ahy mnokana aloa dia hafa-baraka ny fitondrana satria dia tsy mitovy saina izany oe Ramiaramanana naneho ny heviny dia avy tampoka voadaka …………..;;izany tokoa moa no atao oe fusible raha resaka politika no reashina.
raha ny momba nay Rossy aloa dia tiako ny zavtra atony f tsy mety @ saiko ilay oe Rossy ùmnao polotik ry mananten fa hitzona ny teniny izy oe tsy hanao politika intsony.
>izany tokoa moa no atao oe fusible raha resaka politika no resahina
Na dia izany aza dia mbola misy ihany feo mandeha manambara izay mety ho famerenana an’ingahy Ramiaramanana Ministra-taloha eo amin’ny sezany izay mbola banga mandrak’ankehitriny [ministeran’ny Fanatanjahantena, sy Kolontsaina ary Fialamboly].
>tsy mety @ saiko ilay hoe Rossy manao pôlitika
Araky ny hevitrao, moa manao Pôlitika ve ry Mahaleo rehefa mihira ny « Bemolanaga » ? Ry Sareraka [tsy mba miveraka] rehefa mihira ny « Inona no vaovao manerana ny tany » ? Ry rebika rehefa mihira ny « jiro tsy mandeha telefaonina tapaka » ? Dia akory izany ny anambarana ny ataon’i Gothlieb izay olom-boafidy conseiller municipale-n’ny antoko TIM ?
Ny marina dia manahy aho sao mipetraka any Madagasikara ny fanavakavahana ara-pirehan-kevitra pôlitika. Misy ireo mpanakanto mahazo avara-patana … ireo izay manohintohina ny fitondrana kosa dia ambara fa « tsy tokony hitsabatsabaka amin’izay zavatra tsy tokony hidirany »
Tsy afenina anefa fa rehefa misalotra ny fanamian’ny mpisolo vavan’ny vahoaka ireo mpanakanto amin’ny alalan’ny fanapariahana izay tsikeran’ny fiaraha-monina dia isan’ny mpankafy aho, amin’ny maha fitaratry ny fiainana andavan’andro izany. Tsy ireo fanakianana « poaka aty sy be fahatany » anefa no ambarako, fa ireo tsikera « tandrify tsara sady mitombona. »
Misaotra amin’ny fandalovana pakysse 😀
← 08|05|30 – Alim-piangonana | La nuit des églises [Lausanne, CH]
08|06|07 – Gasy ka raha 6 [Genève, CH] →